Hlola i-Great Barriers Reef - World Tourism Portal
Hlola i-Great Barrier Reef, e-Australia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeGreat Barrier Reef
Bukela ividiyo emayelana ne-Great Barrier Reef
Hlola i-Great Barrier Reef, ukwakhiwa kwamakhorali, okukhulu kunawo wonke emhlabeni, okukugudle ugu lwePacific lwaseQueensland, E-Australia. Kuyikhaya elihlelweni elihle lokuphila kwasolwandle futhi linikeza amathuba amahle okuminza.
Uhambo losuku lokuya esixekweni luqala kubude boLwandle lwaseQueensland. Ngokuvamile, enyakatho osuka kuyo, imfushane uhambo lokuya esixekweni, njengoba isondela ogwini olude neCape Tribuse.
Uhlelo lokuvakasha olujwayelekile lwabasebenza kakhulu luhlinzeka ngokuhamba ekuseni kakhulu, Bopha amahora ambalwa kamuva pontoon noma i-cay lapho bewathengele khona amalungelo, imvamisa ilantshi liyatholakala (noma lifakiwe) nokubuya sekwephuzile ntambama ethekwini. Bahlala babuyela endaweni eyodwa noma ezimbili ezithile, futhi akuyona into engjwayelekile ukuthi izikebhe eziningana zibe ngaphakathi kwamamitha ambalwa ambalwa omunye komunye.
Lezi zinhlobo zohambo zinikezwa (okungenani) ukusuka emadolobheni amakhulu asogwini ngaphandle kweCape Tribulation, Port Douglas, Cairns, Townsville, Airlie Beach (Shute Harbour), Mackay, Gladstone, ne1770 (kusuka enyakatho kuye eningizimu).
Kukhona iziqhingi eziningi ezisakazeke ogwini lweQueensland ngamaqembu ahlukahlukene esiqhingi. Abaningi banakekela uhambo lwasemini, ukuhlala ubusuku obubodwa, noma bobabili, bahlinzeka ngamazinga ahlukahlukene ezindawo zokuhlala. Akuzona zonke iziqhingi ezingasogwini ezisogwini. Ezinye ziyiziqhingi zezwekazi, ezinye ziyizimbali zamakhorali. Ezinye iziqhingi zezwekazi zinezingadi zamakhorali ngasolwandle, ezinye azinazo. Ezinye iziqhingi zigcwele impilo yasolwandle, kanti ezinye zinokuncane. Bheka imihlahlandlela yendawo oqonde kuyo, ukubona ukuthi ngabe lesi siqhingi ocabanga ukusivakashela siyipharadesi le-snorkeler, noma nje indawo enhle yokudonsa ideski lokuphumula uphumule.
Iziqhingi ezingekho emthanjeni ngokuvamile zihamba ngohambo losuku ngesikebhe ziye emhlolweni. Amanye alolu hambo, ikakhulukazi lawo aseWhitsundays, angaluthatha ezweni elingaphambi kokuthatha esiqhingini esisodwa noma ezimbili, anikeze abasakazi uhambo oluvela eziqhingini baye ogwini, ogwini baye eziqhingini, nasogwini naseziqhingini ezifika ezigodini. Kulezi zimo, amanani entengo ajwayele ukufana nalokho obewuzokukhokhela ugu. Kodwa-ke, kukhona ezinye iziqhingi (imvamisa zona kuqala) ezinikeza uhambo lwazo, futhi lokhu kungabiza kakhulu.
I-Pumpkin Island Eco Retreat (Isiqhingi sasePumpkin), Yeppoon, Keppel Bay Islands (Iphakathi kweGreat Keppel neNorth Keppel Islands). I-8AM - 18PM. IPumpkin Island engasogwini lweCapricorn eduze naseYeppoon yigolide elikhazimulayo elakhiwe ngaphakathi kweGreat Barrier Reef Marine Park. Lapha uzothola ama-cottage amahlanu ahlotshiswe kakhulu, we-eco-friendly anikezwe umoya nelanga, obheke ogwini lwekristalu. Ngamunye uhlala phakathi kwezivakashi ezine kuya kweziyisishiyagalombili (ezinobuningi be-30) futhi ugcwele ngokwayo, uhambisana kakhulu nokuziqhenya futhi uhlukaniswe kahle komunye nomunye.
Isiqhingi saseBedarra, i-Bedarra Island, eQueensland. Isiqhingi esinabanikazi abazimele phakathi kweGreat Barrier Reef neSouth Mission Beach ezweni elikhulu. Kulesi siqhingi yindawo enhle yokunethezeka equkethe ama-villas we-16 ahlanganiswe ehlathini lemvula. Njengoba inabavakashi abaningi be-32 endaweni yokuphumula noma ngasiphi isikhathi, lesi siqhingi siseyimfihlo kakhulu emhlabeni ongaphandle. Izingane ezineminyaka engu-12 nangaphansi azinakwa. IGreat Barrier Reef iseduzane futhi ihlelwe ngokuhleleka kwesikebhe sokudonsela amanzi ngomshini kanye nokuya ngokudonsela phansi eGreat Barrier Reef kungahlelelwa.
IHaggerstone Island, iHaggerstone Island, eQueensland. Indawo yokuhlala yesiqhingi yokunethezeka eyimfihlo ngasenyakatho ekugcineni kweGreat Barrier Reef. Indawo yokuphumula ihlanganisa konke - inezindawo ezinhlanu zokubukwa kolwandle futhi inobungani emndenini. Imisebenzi ifaka i-snorkeling, ukudoba nokudonsa.
Abahambi abanengi bafunda ukuntywila eTownsville, eCairns noma ePort Douglas: bonke banemboni yokuncintisana yokutshuza kakhulu. Iningi labafundi lithanda ukwenza ichibi lezinsuku ezimbili kanye nezifundo zasekilasini, kulandele izinsuku ezimbili noma ezintathu bahlala ngaphakathi bevakashela edwalini empumalanga yeCairns. Kungenzeka ukuthi ufunde nabanye opharetha abahamba oLwandle lweCoral, kepha uhlole kuqala ngobunzima bezindawo zabo abaphonsela kuzo.
Olunye uhambo oluya emihumeni luyatholakala kusuka kubasebenzi be-diving baseCairns nasePort Douglas. Lolu hambo lubandakanya ukuhamba ngesikebhe kwehora le-2 eqonde ngakunye. Iningi labasebenzayo lihlala izinsuku ezintathu phakathi kwezihlahla ezisempumalanga yeCairns. Ama-snorkelers angahamba kuloluhambo ngamanani ancishisiwe, kepha hlola kuqala mayelana nokufaneleka kwezindawo zawo ukuthola i-snorkeling. Abantu abahlukene kakhulu bavame ukukhetha izinsuku ezinhlanu noma eziyisikhombisa ezihlala lapho bevakashela uLwandle lweCoral enyakatho.
Uhambo oluningi lwesikebhe, ikakhulukazi oluhlala ngaphakathi, lungaba ngama-40% ashibhile uma ubhukelwe ekugcineni kwamanani. Inani elithile lobungozi liyabandakanyeka ekwenzeni lokhu: kufanele ufike lapho unethemba lokuthi ukubhuka kuzotholakala, kuzodingeka ukwazi ukuguquguquka ngandlela thile ngosuku lwakho lokuhamba, futhi kungenzeka ungakwazi ukuhamba nohambo lwakho opharetha wokuzikhethela wokuqala. Kodwa-ke, iningi labaphambukeli libika ukuthi bayakwazi ukuthola okungenani uhambo olulodwa lokuma lapho bezama lokhu.
Ezinye zalezi ziqhingi zinomugqa wokufiphaza, futhi kungenzeka ukuthi ungene emanzini noma u-snorkel kusuka ogwini.
Ingxenye yaseningizimu yedolobho ese Townsville yaziwa kakhulu ngokuphahlazeka kweYongala, evakashelwa ngabasebenzi abahamba nababili abasuka e Townsville, Ayr nase Magnetic Island. I-Yongala yacwila ku-1911 cishe ngamamitha ayi-30 wamanzi. Njengoba phansi kungenasici kule ndawo, kuyindawo yezinhlanzi namakhorali. Kodwa-ke, njengoba isiza singavikelekile uhambo oluningi kufanele lukhanseliwe uma isimo sezulu singathandeki.
Ukudla kwasolwandle eziqhingini zaseGreat Barrier Reef nasezindaweni ezisogwini eziseduze kumnandi. Kunezindawo ezinqunyelwe ukudoba, yize kungaba ngcono uma uya endaweni yokudlela. Izinhlanzi ezi-Reef ziyatholakala nasezitolo zezinhlanzi nezama-chip.
Uhambo losuku lwe-Reef luthengisa utshwala ebhodini. Iziqhingi zaseReef cishe zihlala zinendawo okungenani eyodwa, imvamisa kakhulu enkabeni yokuphila kwesiqhingi. Abanye banamabha wamachibi wokudala. Abanye baba nomcimbi omncane wephathi, abanye baneziphuzo echibini, kanti abanye basondele kusenesikhathi, bagxile kuleso sithombe esincamela ukuvuka ekuseni ukuze babone kusa, kunalokho bakubone kubusuku bangaphambilini. Bheka imihlahlandlela yokuya lapho uya khona.
Kunezinsongo zasolwandle emhlolweni, kusukela eStonefish kuya eSwark, Snake Sea kuya eJellyfish. Uhambo oluningi lokuya esixotsheni lwenziwa unyaka wonke, futhi ukulimala ngenxa yanoma iziphi zalezi zinto ezibangelwa umhlanga akuvamile. Noma kunjalo, thola izeluleko kwiziphathimandla, ulalele zonke izimpawu futhi unake izexwayiso zokuphepha.
· Ibhokisi le-jellyfish livela emabhishi naseziqeshini zemifula ukusuka ngo-Okthoba kuya ku-Ephreli enyakatho ye 1770. Ngezikhathi ezithile zingatholakala ngaphandle kwalezi zikhathi. Imvamisa ayitholakali emanzini ajulile noma ngaphezulu kwamakhorali, futhi iningi labantu elihlwitha emadwaleni lenza kanjalo ngaphandle kokuvikelwa kwesitofu. Noma kunjalo ukugqoka i-wetsuit (etholakala kuzo zonke izikebhe ze-dive) kuzokunikeza i-buoyancy engeziwe, futhi nokuvikelwa okuthile kuma-stinger. Zivamile kakhulu, kepha ziyabulala.
Oshaka bakhona, kepha abavami ukuhlasela abantu. Iningi labasakazi liyabesaba abantu futhi liyobhukuda.
· Amanzi Ezinhlwathi Ezinamanzi Izingwenya azihlali ngenkuthalo olwandle, indawo yazo eyinhloko isendaweni esezifuleni ezisenyakatho ukusuka eRockhampton. Bangasebenzisa ulwandle njengendlela yokuhamba phakathi kwezinhlelo zemifula neziqhingi. Kuqabukela kakhulu ukuthi bangene ezindaweni zamakhorali. Izingwenya azibhukudi ezigodini.
· Ukushiswa yilanga nokuphelelwa amandla Ilanga le-QLD lingashisa isikhumba esingavikelekile ngesikhathi esifushane kakhulu (isikhathi. Imizuzu ye-20). Ngisho nangezinsuku ezinamafu ezinelanga ilanga linconywa kuzo zonke izindawo zesikhumba eziveziwe, ikakhulukazi ezinganeni. Iningi lezeluleko ezitholakalayo libonisa ukungaphumi elangeni eliqondile phakathi kwamahora we-10am ne-3pm, kepha isigqoko esibanzi, izembatho ezigqokwa yilanga nokukhanya kwelanga okuphezulu kwe-SPF kuzohamba ibanga elide ekuqinisekiseni ukuthi ungasijabulela isikhathi sakho ezindaweni ezishisayo. Icala elibi lokushiswa yilanga lizokuphoqa ukuthi uhlale ezindlini izinsuku ezimbalwa, ngakho-ke akulifanele. Futhi, phuza amanzi okuphuza nawe njengoba ngisho nokuphelelwa ngamandla komzimba kungaholela ekushiseni / ekushiseni kwelanga. Ukuphuza utshwala esimweni esishisayo ngaphandle kokuphuza namanzi amaningi akuphephile, futhi okungenani kuholele kwi-hangover emnandi!